Puntland oo ka jawaabtay Go’aanka Golaha shacabka ay dalka uga mamnuuceen shirkadda DPWorld. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Puntland oo ka jawaabtay Go’aanka Golaha shacabka ay dalka uga mamnuuceen shirkadda...
Puntland oo ka jawaabtay Go’aanka Golaha shacabka ay dalka uga mamnuuceen shirkadda DPWorld.
Iyadoo Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ay maalinti isniinta ee aynu soo dhaafnay meel mariyeen xeer ay dalka uga mamnuuceen shirkadda DPWorld ee imaaraadka oo ka howlgasha dekado ku yaala dalka aya waxaa ka jawaabay maamulka Puntland.
Hadalka wasiirka dekadaha maamulka Puntland ayaa imaanaya xilli golaha shacabka ay meel mariyeen xeer dalka looga saarayo shirkadda DPWorld iyadoo dadka intoobada sheegaan in P&O ay tahay ama kamid tahay DPWorld.
sidoo kale Golaha aqalka sare ayaa maanta ka shiraya kana doodaya xeerka Gudaha Soomaaliya looga mamnuucay shirkadda DPWorld.